မူလစာမျက်နှာ - Marine Diesel Basic
ဘာ ပြုပါရန်နှင့် ဘယ်တော့လဲ
စစ်ဆေးရေးဂိတ်များ & ပိုပြီး
ကို Maintenance, Lay-up, ထောက်ခံချက်
222 စာမျက်နှာများ, 300 + ရေးဆွဲ
အမေရိကန် $ 15.99 paperback $ 9.99 ebook
အင်ဂျင်၊ ပန့်များ၊ seacocks၊
280 + စကားလုံးများ၊ 50 + ရေးဆွဲမှုများ
YouTube ကို Channel ကို
ဒီဇယ် & လှေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အကြံပြုခြင်းအတွက် VISUAL လမ်းညွှန်
140 + လုပ်ငန်းများကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်
paperback နှင့် Kindle, iBooks, Google, Kobo
222 စာမျက်နှာများ။ အမေရိကန် $ 15.99 £ 10.99 € 12.99
အခမဲ့ အင်ဂျင်ပါဝါ 1500 + လက်စွဲစသည်တို့
အသက်ရှူ, စားသုံးမှု & အိပ်ဇော
အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုဖတ်ရှု အသုံးပြုသူများ၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ ကိုယ်ပိုင်ရေးပါ ပြန်လည်သုံးသပ်
“ မင်းရဲ့လုံးဝအံ့သြဖွယ်ကောင်းလှတဲ့“ အဏ္ဏဝါဒီဇယ်အခြေခံများ” စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးပြီ။ ငါဖတ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့ရင်လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၅ နှစ်က။ အမှားတွေကြောင့်သင်ခန်းစာအများကြီးသိမ်းဆည်းပြီး၊ ပုံဥပမာကားများသည်တောက်ပသည်။
ရော်ဂျာ L ကို, စာရေးသူမှအီးမေးလ်
"။ ။ ငါတွေ့ခဲ့သမျှသောအကြောင်းအရာများအတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ဒီဇယ်တပ်ဆင်ထားသောလှေတိုင်း၌နေရာရှိသည်။ "
ပီတာ Nielsen, ရွက်မဂ္ဂဇင်း
လက် point..Very အထောက်အကူဖြစ်စေသရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေဇယားဖို့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကြောင်းမစ္စတာဖြစ်ပါသည် - ။ "အထဲကအဲဒီမှာအကောင်းဆုံးအဏ္ဏဝါဒီဇယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစာအုပ် ... ငါဒီတစျခုငါ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်ငါအပေါ်ငါ့လက်ကိုရနိုင်တိုင်းအဏ္ဏဝါဒီဇယ်စာအုပ်ကိုဖတ် Berwick သင်အမှန်တကယ်ကြောင့်အလုပ်လုပ်ဖို့ကိုသွား, သူသည်ထိုသူတို့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဘို့ကြီးသောအကြံပြုချက်များရှိပါတယ်အခါသင်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ငယ်ကို real-ဘဝပြဿနာများကို ... Highly အကြံပြုနားလည်ပါတယ်။ "
Dave N. အမေဇုံ (အတည် ပြု. ဝယ်ယူ)
"Excellent ကစာအုပ်, ဖြောင့်ရှေ့ကိုနှင့်အမှတ်ရန်။
ရောဘတ် Edwards က, amazon.com
" ... ရှင်းလင်းစွာရငျးနှီးဘာသာရပ်သိတယ်နှင့်တစ်ဦးအလွန်လွယ်ကူသော-to-နားလည်ထုံးစံအတွက်စာဖတ်သူကိုအားမိမိအသိပညာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ဖြစ်ခြင်း၏ရှားပါးလက်ဆောင်တစ်ခုရှိပါတယ်။ "
ဒစ်ခ် McClary, အယ်ဒီတာ ရှကျလှေ Cruise, ပြဿနာ #41 ဇန်နဝါရီလ 2018
" ... ကိုယ့်အသိကိုတစ်လမ်းထွက်ထားကြ၏။ ဒါဟာဖတ်ပါနှင့်သိမ်းသွင်းဖို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ "
မိုက်ကယ် Erkkinen, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြန်လည်သုံးသပ်ဒီဇင်ဘာလ 2017 ။
လူတိုင်းအဘို့လှေရဲ့စာကြည့်တိုက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်ကြောင်း "ဟုတောက်ပသောစာအုပ် ... အသေးစိတ်အာရုံစိုက်အထူးသဖြင့်တွေ့ကြုံသော်လည်းမိမိတို့၏အင်ဂျင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထိန်းသိမ်းလုံးဝနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ကြသည်မဟုတ်သောသူတို့အဘို့ဤစာအုပ်ကိုစံပြစေမည်
ရေကြောင်းစိတ် blog post: နိုဝင်ဘာ 2017
"Berwick ရဲ့လမ်းညွှန်ကပဲသူ့ရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသရုပ်ဖော်ပုံများကြောင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်အပေါ်ဘယ်သူ့ကိုမှများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းထုတ်ကိုစတင်တာဖြစ်ပါတယ် ... မှုကြောင့်၎င်း၏ရိုးရှင်းသော, အမြင်အာရုံလမ်းညွန်မှအင်ဂျင်ခန်းထဲမှာအပေါ်အနည်းငယ်ပိုလက်အားရလိုသောသူတို့အဘို့ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုဖြေရှင်းရန်စတင်သောအခါအကြှနျုပျကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ Wind YouTube ဗီဒီယိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်၏နာရီရာပေါင်းများစွာသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပါလိမ့်မည်။ တောင်မှအချိန်ပြည့်၏5နှစ်ပေါင်းဒီလိုမြင်ကွင်းနှင့်အင်ဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထိုနောက်ငါဒီလမ်းညွှန်အသစ်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်တစ်အရေအတွက်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါသည်အမြင့်မားကအကြံပြုလိုပါတယ်။ "
ကောင်းသောအဟောငျးလှေ, 2017 လဲကျ
" ... အဆိုပါပူးတွဲသရုပ်ဖော်ပုံများစာအုပ်တစ်ဦးအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေရည်ညွှန်းအလုပ်လုပ်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏ ... ... အရာအားလုံးဖုံးလွှမ်း၏။ "
Zeilen (ဒတ်ချ်ရွက်မဂ္ဂဇင်း) အောက်တိုဘာလ 2017
" ... အကြောင်းအရာတစ်ခုသိပ်ကိုပြည့်စုံလွှမ်းခြုံ ... ဤသူသည်သင်တို့ ... Highly အကြံပြုရလိမ့်မယ်အဖြစ်လမ်းညွှန်အဖြစ်ကောင်းလှ၏။ "
သြစတြေးလျရွက်လွှင့်မဂ္ဂဇင်း, အောက်တိုဘာလ-နိုဝင်ဘာ 2017
"အလွန်, အသုံးဝင်သောလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်အမှတ်သည်လှေပေါ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေ။ ကောင်းမွန်သောအလုပ်ဗိုလ်ကြီး Berwick !! အချို့ပိုပြီးစာအုပ်တွေရေးပါ။ "
"သင်၏စာအုပ်ငါ၏အကျောင်းသားတွေနဲ့အတူအစောပိုင်းရက်သတ္တပတ်အတွင်းမုန်တိုင်းဆင်းသွားလေ၏ ... "
ကို C ပါဝါသင်တန်း, စကော့တလန်
"Excellent ကရှင်းရှင်းလင်းလင်း, စုံစုံနဲ့နောက်ကိုလိုက်ရန်လွယ်ကူ။ Highly အကြံပြု"
။ "Dennison Berwick ဒါသူတို့ရဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်များကခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်းရပ်တန့်ရန်နှင့်အခြေခံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတကယ်လွယ်ကူသည် ... ဒါပေမယ့်သင်ကလုပ်ပေးရန်ရှိသည်သင်တန်းသူ၏လက်ျာနှင့်ဤသတင်းစကားကိုစိတ်ထဲငါနှင့်အတူရေးသားခဲ့ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လှေပိုင်ရှင်တွေစိန်ခေါ်; မဟုတ်တဲ့ -marine ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပန်းဖြေရွက်လှေပိုင်ရှင်ကို။ သူ့ဓါတ်ပုံတွေကိုမှတ်သားစရာများခဲ့ကြသည်နှင့်သူ၏အပြုသဘောဒါဟာ thoughtfully ကောင်းစွာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားနှင့်သရုပ်ဖော်ပုံများဒီခေါင်းစဉ်သုံးစွဲနိုင်စေ ... ဖှယျခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအလွန်အမင်းကြောင့်အကြံပြုပါသည်။ "
"ငါသည်ခဲယဉ်းမိတ္တူရှိသည် - တောက်ပလုံးဒီဇယ်တန်ခိုးနှင့်ရှိသမျှသောလှေပိုင်ရှင်တွေဖို့အကြံပြုနှင့်-ပါလိမ့်မယ်မှမကြာမီ-to-ဖြစ်လှေပိုင်ရှင်တွေဂရိတ်အကောင်းဆုံးအမြန်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ဒီဇယ်စက်ပြင်ကျောင်းသားများအတွက်။ ။ ။ "
ပိုမိုလေ့လာပါ & မာတိကာ